प्रधानन्यायाधीशको बेइमानी १३ बुँदामा हेर्नुहोस् - Kantipath.com
प्रधानन्यायाधीशको बेइमानी १३ बुँदामा हेर्नुहोस्
काठमाडौँ । इतिसम्बत २०७३ माघ २८ गते शुक्रबार सरकारी समय घर्केपछि सर्वोच्च अदालतमा एउटा निवेदन पुग्यो । जसमा सरकारले डिआइजी ‘जय बहादुर चन्दलाई आइजिपिमा नियुक्त गर्दै छ रे…’ त्यसलाई रोक्नु पर्‍यो भन्ने आशयको शब्दावली थियो ।
विभिन्न पत्रपत्रिका तथा अनलाईनमा आएको समाचारलाई प्रमाण मान्दै रिट दायर गर्न पुगेका एमाले निकट युवा संघका अनुशासन आयोगका सदस्य तथा अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल सर्वोच्चमा पुगेका थिए । तर, सरकारी समय सकिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्विकार गर्‍यो । केही बेरमा सर्वोच्च प्रशासनमा ‘माथिबाट’ (प्रधानन्यायाधीश)बाट फोन आयो ।
फोन आएको केही बेरमा नै सर्वोच्चमा रिट दायर भयो । सरकारले माघ २९ गते डिआइजी जय बहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा नियुक्ती दियो । नियुक्ती दिएको केही घण्टा नबित्दै प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलाशले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र चन्दलाई प्रहरी प्रमुखमा बढुवाको निर्णय यथास्थानमा राख्न अन्तरकालिन आदेश दियो । यहाँसम्मकी पुरक निवेदन परेको खबर महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई समेत दिइएन ।
‘ईतिसम्बत २०७३ फागुन २ गते रोज शुभम…’ सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो ।
नेपाल प्रहरीको डिआइजी तथा सिआइबी प्रमुख नवराज सिलवालले आफ्नो बाबुलाई मिटर ब्याज लगाई झूटो मुद्दामा जेल हालेको भन्दै सागर थापा सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउँन पुगे । सर्वोच्च अदालत सागरको लागि अन्तिम विन्दु थियो । यसअघि उनले प्रहरी प्रधान कार्यालय, संसदको राज्य व्यवस्था समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म निवेदन दिइसकेका थिए । तर, कतै सुनुवाई भएको थिएन । सागरलाई न्यायलयमाथि भरोसा थियो उनी सर्वोच्च इजलाशमा आफ्नो पितामाथि भएको ‘अन्याय’को प्रमाण (अडियो-भिडियो) सहित पुगे । सर्वोच्च अदालतले अर्को दिनका लागि पेसी तोकेको थियो ।
तोकिएको मितिमा बहस हुँन सकेन दुई दिनलाई सारियो । अर्को दिन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश इश्वर खतिवडाको इजलाशमा सागरको पिता गुन बहादुर थापालाई जेलको ‘कालकोठरी’मा पु¥याउँनेहरुलाई कारबाहीको अन्तरिम आदेश होला भनेर उनका छोराले आशा गरेका थिए । तर, दूर्भाग्य सर्वोच्च अदालतले सागरको सपनामाथि ‘लात’ हाँनिदियो । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलाशले सागरको रिट खारेज गरिदियो । सर्वोच्चको आगनमा सागरले थुकिदिए । सागरले त्यो दिन सर्वोच्च तर्फ मात्रै थिएनन् नेपालको न्यायालयमाथिको ‘शोकगित’ थियो ।
माथीका यी दुई घटना नेपालको न्यायलयको ऐना हुन् । यी घटनाले नेपालको न्यायलय कसका लागि काम गरिरहेको छ भन्ने समेत स्पष्ट पारिदिन्छ । हुन त नेपाली समाजमा चर्चित उखान ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ त्यसै बनेको कहाँ हो र ? आफ्नो पीतामाथि भएको अन्यायको प्रमाण सहित सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मुद्दा खारेज हुन्छ भने भविष्यमा हुनसक्ने घटनालाई आंकलन गरिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुन्छ । यो सर्वोच्च अदालतको अनुहार हो । नेपाल प्रहरीको आइजीपि प्रकरणमा सर्वोच्च अदालत भित्र निकै गम्भिर गल्तिहरु भएको र सेटिङ भएको केही तथ्यहरुले देखाउँछ । न्यायलयमा भएको केही गम्भिर त्रुटीहरुको फेहरिस्त यसरी बुँदागत रुपमा उल्लख गरिएको छ ।
१. गत माघ २८ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई प्रतिपक्ष बनाइयो । तर, पछिल्लो समयमा आएका अन्तरिम आदेशमा भने डिआइजी जय बहादुर चन्दलाई विपक्षि बनाईन्छ ।
२. नेपाली कांग्रेस र कांग्रेस सहितको नेतृत्वमा सरकार छ । यतिबेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा होइनन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन् । देउवाले राजनीतिक ढंगले दबाब दिनसक्लान् तर उनी आइजिपी नियुक्तीमा कागजी रुपमा विपक्षी हुनुपर्ने व्यक्ति होइनन् । तर उनलाई समेत विपक्ष बनाएर हालिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अहिलेसम्म बहसमा छ ।
३. २०७३ फागुन १ गते विहान ९ बजे सरकारले नेपाल प्रहरीको आइजीपिमा जय बहादुर चन्दलाई नियुक्त ग¥यो । त्यो खबर सरकारले आधिकारिक रुपमा आफ्नो मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा नराख्दै सञ्चार माध्यममा आएको समाचारको आधारमा सर्वोच्चमा गम्भिर ऋुटी गरियो । जहाँ माघ २८ गते सर्वोच्चमा दायर भएको रिटको ‘कल लिस्ट’ सार्वजनिक नहुँदै प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीले हचुवाको भरमा अन्तरकालिन आदेश जारी गरिन् ।
४.सर्वोच्च अदालतमा सामान्यतय ११ः३० मा बेन्च बसिन्छ । तर नवराज सिलवालको रिटको पक्षमा सुनुवाई गर्न भने सर्वोच्च अदालतमा एक घण्टा अघि नै बेन्च बसिएको थियो –११ः३० मा । उक्त रिट निवेदनमा कानुन व्यावसायीको बहस नै सुनिएको थिएन । अधिवक्ता कपिलदेव ढकालको तर्फबाट फाँटमा पुरक निवेदन समेत दर्ता नगर्दै हतार हतार इजलाशमा सोझै पेश गरिएको थियो । पुरक निवेदनपछि हचुवाकै भरमा सुशीला कार्कीले अन्तरकालिन आदेश जारी गरिन् ।
५. यसरी पुरक निवेदन आएमा कानुन बमोजिम फाँटमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा नियमानुसार पेशी चढी इजलाश समक्ष पेश हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर त्यसो नगरी सोझै इजलाश समक्ष पेश भएको उक्त पुरक निवेदन पेशीमा नचढाई कानुन विपरित उक्त पुरक निवेदनमा नै अन्तरिकालिन आदेश गर्नुलाई कानुनी भाषामा ‘गम्भिर कार्यविधिगत त्रुटि भनिन्छ ।
६. कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार पुरक निवेदन पेश गर्दा सामान्य लिखाई वा टाईपको त्रुटी सच्याउने प्रयोजनको लागि दिन सकिन्छ । सो बाहेक मुल निवेदनमा विपक्षि नबनाएकोलाई विपक्षि थप गर्न मूल निवेदनमा माग नगरेको कुरा माग गर्न वा त्यस्तै प्रकारका विल्कुल नयाँ मुद्दामा गम्भिर असर र प्रभाव पु¥याउँने विषय बस्तु समावेश गर्न नमिल्ने, यदि पुरक निवेदनमा त्यस्तो गरको रहेछ भने उक्त निवेदन दर्ता नहुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । तर त्यसको विपरित उक्त पुरक निवेदनमा मूल निवेदनमा विपक्षी नबनाइएको जय बहादुर चन्दलाई विपक्षी बनाइएको छ । मुल निवेदनमा उल्लेख नगरिएको विषयलाई पुरक निवेदनमा उल्लेख गरी निवेदकको माग समेत परिवर्तन गरियो । सो देख्दा देख्दै गैरकानुनी तरिकाले निवेदनलाई स्विकार गरी अन्तरकालिन आदेश गरेको देखिन्छ ।
७. अन्तरिम आदेश जारी हुँने नहुँने विषयमा ताकिएको डिभिजन बेञ्चले अन्तरिमको सम्बन्धमा बोल्नु पर्नेमा मुद्दामा म्यारिटमा नै प्रवेश गरी फैसलामा मात्रै उल्लेख गर्न मिल्ने कुराको उल्लेख गरी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । जसलाई कानुन व्यावसायीहरुले स्विकार गरेका छैनन् ।
८. मिति २०७३ फागुन १ गते डिआइजी नवराज सिलवालले आफूलाई आइजीपि बनाइ पाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । जसमा त्यो भन्दा ठीक दुई दिन अघि कपिलदेव ढकाल दर्ता गरेको रिटको प्रकरण नम्बर, अनुच्छेद ब्यहोरा र पृष्ट समेत हुबहु सारिएको थियो । प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीले कपिलदेवकै रिटमा जारी भएको अन्तरकालिन आदेशलाई आधार लिएर नवराजको रिटमा पनि अन्तरिनकालिन आदेश जारी गरेकी थिइन् । यो न्याय सिद्धान्तको प्रतिकुल हुने कानुनविद्हरुको भनाई छ ।
९. सर्वोच्चमा एक अर्का न्यायाधीश छन्–तेजबहादुर केसी । स्रोतका अनुसार केसी प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीको सम्धी नाता पर्ने व्यक्ति हुन् । उनै केसीले पुर्ण सुनुवाईको लागि डिभिजन बेञ्चमा पेस हुँदा इजलाशमा थिए । अन्तरिम आदेश मुद्दाको म्यारिटमा समेत उनले बोली सकेका थिए । उक्त मुद्दामा ‘उनले बोल्न नमिल्ने’ भन्दै महान्यायाधीवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले प्रश्न उठाएपनि उनले नै फूलबेन्चमा पेस गरे । कानुनविद्हरुका अनुसार न्यायधीशलाई त्यस्तो अधिकार दिइएको छैन ।
१०. सामान्यतय फूल बेञ्चमा कुनै मुद्दा पेश हुँदा संयुक्त इजलाशका न्यायाधिशहरुका बीच राय बझाएको खण्डमा मात्रै फूल बेन्जमा पठाउने प्रचलन छ । तर , यो मुद्दामा भने सबै न्यायाधीशहरुको एकैमत ’ भन्दै महान्यायाधीवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले प्रश्न उठाएपनि उनले नै फूलबेन्चमा पेस गरे । कानुनविद्हरुका अनुसार न्यायधीशलाई त्यस्तो अधिकार दिइएको छैन ।
१०. सामान्यतय फूल बेञ्चमा कुनै मुद्दा पेश हुँदा संयुक्त इजलाशका न्यायाधिशहरुका बीच राय बझाएको खण्डमा मात्रै फूल बेन्जमा पठाउने प्रचलन छ । तर , यो मुद्दामा भने सबै न्यायाधीशहरुको एकैमत छ । यद्धपी कानुनको गम्भिर विषय देखाउँदै हचुवाको भरमा फूल बेञ्चमा सुनुवाईको लागि पठाइएको छ ।
११. प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, इश्वर खतिवडाले डिआइजी सिलवालको पक्ष लिएर सुनुवाई गरेको दृेष्टान्त जगजाहेर नै छ । तर, यसरी पक्षपातपूर्ण आदेश दिने न्यायाधीशहरुकै ५ सदस्यीय फूल बेञ्च गठन गरियो । इश्वर खतिवडा तिनै न्यायाधीश हुन् जसले सर्वोच्च अदालतमा नवराज सिलवाल विरुद्ध परेको मुद्दा खारेज गरिदिएका थिए । जसमा उनले रिट निवेदनमा ‘सो कज’ नै नगरी खारेज गरिदिएका थिए ।
१२. प्रस्तुत इजलाशमा सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ देखिएको भन्दै महान्यायाधीवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठले प्रश्न उठाएका थिए । तर, कार्कीले ठाडै अस्विकार गरेकी थिइन् । १३.प्रहरी प्रमुखबारेको मुद्दालाई गम्भिर मुद्दाको रुपमा लिइन्छ । यस्तो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका प्रधान्यायाधीश र सिनियर न्यायाधीश सम्मीलीत इजलाश गठन गरिने सुनुवाई गरिने प्रचलन छ तर उक्त मान्यता विपरित हरिकृष्ण कार्की, तेजबहादुर केसी, इश्वर खतिवडा लगायत कनिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित समिति गठन गरिएको छ । दियोपोष्टबाट ।
Previous Previous post: प्रधानन्यायाधीशप्रति महान्यायाधिवक्तासहित दर्जन वरिष्ठ अधिवक्ताको आपत्ति
Next Next post: एसइई परीक्षा : ५ निरीक्षकलाई परीक्षा केन्द्रबाटै निष्कासन